(မရူစာလူမျိုး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြူ လူမျိုး၊ မြုံလူမျိုး သို့မဟုတ် မြိုလူမျိုး (အင်္ဂလိပ်: Mru; ဘင်္ဂါလီ: মুরং)၊ မရူစာလူမျိုး ဟုမိမိကိုယ် ကိုယ် ခေါ်ဆိုကြသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယ်စပ်တလျောက်တွင် နေထိုင်ကြသော လူမျိုးစု တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် အများစု နေထိုင်ကြပြီး ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတို့တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသတွင် နေထိုင်ကြပြီး ရန်ဂါမတီခရိုင်နှင့် ဘင်ဒရိုဘင်ခရိုင်တို့တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်တွင် အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြသည်။
မြူလူမျိုးဟူသော စကားလုံး အရေးအသားနှင့် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲ ခြင်း သည် မူလအမည်နာမဖြစ်သည် မြူ အသံထွက် ကို ရခိုင်တို့က ယင်းနှင့်နီးစပ်သော အသံ မြို ဟု ခေါ် ဆိုပြီး ဗမာတို့ကမူ" မြို "ကို "မျို"ဟုပင် အသံထွက်ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Hattaway, Paul (2004). Peoples of the Buddhist World: A Christian Prayer Diary. Pasadena, CA: William Carrey Library, 195. ISBN 9780878083619။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြူလူမျိုး&oldid=550950" မှ ရယူရန်
၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။